Sawirro: Dannjire Kay iyo Muungaab oo ku buneystay degmada Hiliwaa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sawirro: Dannjire Kay iyo Muungaab oo ku buneystay degmada Hiliwaa
Muqdisho – Mareeg.com: Danjiraha Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayaa shalay booqasho ku tegay xarrunta maamulka gobolka Banaadir ka sameystay degmada Hiliwaa ee magaalada Muqdisho.
Danjire Kay ayaa waxaa xarruntaas kusoo dhaweeyey qaar ka mid ah mas’uuliyiinta gobolka Banaadir oo ay ku jiraan gudoomiyaal degmo, odoyaal dhaqameed, Barbaarta Gaashaaman iyo dadweyne kale.
Intii ay soo dhaweyntu socotay ayaa danjire Nicholas Kay iyo gudoomiye Muungaab ku buneysteen xafiiska, iyadoo dhanka kale danjire Kay oo ka qeybqaatay shiribkii ay ku dabaaldegayeen kooxda Barbaarta Gaashaaman.
Soo dhaweynta kadib waxaa kulan aan saxaafaddu goob jog aheyn wada qaatay gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Muungaab iyo danjiraha Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Nicholas Kay.
Kulanka oo muddo saacado qaatay, islamarkaana ayaa waxaa looga hadlay arrimo ay ka midtahay, Amniga, Ilaalinta xaquuqda aadanaha iyo kaalinta Qaramada Midoobay uga aadan horumarka ka socda degmooyinka Gobolka benaadir iyo arrimo kale.
Danjire Nicholas Kay oo kulanka markii uu soo idlaaday kaddib la hadlay arbaahinta ayaa sheegay inuu xarrunta cusub ee maamulka gobolka Banaadir u tegay si uu ugu hambalyeeyo, islamarkaana u dhiirigeliyo gudoomiyaha gobolka gobolka Bnaadir Xasan Muungaabd iyo gudoomiyaasha cusub ee degmooyinka ee uu dhawaan magacaabay.
Danjire Kay ayaa sheegay in UN-ku sii xoojinayo taageerada ku aadan xasilinta iyo nabad ku soo dabaalidda guud ahaan dalka Soomaaliya.
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna duqa Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Muungaab oo isna saxaafadda la hadlay ayaa tilmaamay in uu aad ugu faraxsanyahay in Wakiilka Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya uu ku qaabilo xarunta cusub ee Maamulka oo ku taalla degmada Heliwaa, isagoo xusay intaasi ay ka turjumeyso horumarka iyo amniga ka jirta caasimadda
Waa markii ugu horeysay uu Guddoomiyaha Gobolka Benaadir xafiiskiisa degmada Hiliwaa ku qaabilo danjire Nicholas Kay tan iyo markii uu qabtay xilka guddoomiyaha Gobolka.